CMI Energy sy BC Solar: afaka mamokatra herinaratra azo tahirizina | NewsMada
CMI Energy sy BC Solar: afaka mamokatra herinaratra azo tahirizina
Nampahafantatra ny tetikasany tamin’ny atrikasa niantsoana ireo orinasa sy indostria, omaly teto an-dRenivohitra, ny CMI Energy miaraka amin’ny solontenany eto Madagasikara, ESE (Energie sécurité équipements) sy ny mpiara-miombon’antoka aminy BC Solar.
Nampahalalana tamin’io atrikasa io ny teknika fitantanana sy fitahirizana angovo, ampy ho trandrahina sy hampihena ny vidiny. Tsy misy tsy mahalala fa sakana ho an’ny fampandrosoana ny tsy fahampian’ny angovo eto amintsika. Vesatra lehibe ho an’ny orinasa ihany koa ny vidiny. Koa ny CMI Energy, vondrona iraisam-pirenena, nisafidy hitodi-doha aty Madagasikara avy amin’ny tolo-kevitra naroson’ny ESE sy ny BC Solar.
Tanjona ny hampihena ny fandaniana sy fiarovana ny mpiasa sy ny orinasa, traikefa izay efa ananan’ny ESE. Angovo azo avaozina ny vokarina, hatomboka amin’ny fanadihadiana ny amin’izay filàn’ny orinasa iray sy fametrahana ireo fotodrafitrasa mifanaraka amin’izany. Samy manana ny mampiavaka azy ny orinasa isanisany. Tsy mitovy, araka izany, ny tetibidin’ny fotodrafitrasa.
Mampihena ny vidin’ny angovo
Misongadina amin’ity tetikasa ity ny fametrahana « batteries » hahazoana mitahiry angovo tsy ho verivery fotsiny nefa azo ampiasana amin’ny fotoana rehetra ilàna azy. « Manampy ny indostria izahay mamaha ny olana, miaro ny tontolo iainana, ary indindra mampihena ny vidin’ny angovo. Izay orinasa misedra olana amin’ny famatsiana angovo tsy maintsy misy fiantraikany any amin’ny famokarany, ka ny fahazoana mitahiry angovo antoka lehibe iray mamaha ny olana », hoy i Régis Frankard, avy ao amin’ny CMI. Nanome ohatra izy ireo momba ny tetikasa mifandraika amin’izany any Belzika misy ny foibeny, sy any amin’ny firenena afrikanina maro, tsara alain-tahaka atao eto Madagasikara.
Nasaina manokana nandray anjara tamin’ny atrikasa ny ORE (Office de régulation de l’électricité), nitondra fanazavana ny amin’ny lafiny lalàna sy ny fepetra. Araka ny lalàna, tsy maintsy eo ny fiaraha-miasa amin’ny Jirama, sy ny vola alain’ny fanjakana amin’ireo orinasa tsy miankina miditra amin’ny famatsiana herinaratra ireo. 1,2% amin’ny vola mihodina famokarana herinaratra no alain’ny fanjakana.